Archive du 03-juin-2022
Vondron’ny mpanohitra Ho tonga hatraiza ny fiarahana ?
Namaly ny antson'ny Filoha Ravalomanana ny fanoherana ao anatin'ny vondrona Panorama sy ny RMDM. Nampitovy tadin-dokanga mba hanamafisana fa ilaina ny fifampidinihana na ny fikaonan-doha nasionaly na “concertation nationale” mialohan'ny fifidianana.
Tompondakan’ny tsy fahaiza-mitantana
Efa an-taonany izao no nimenomenoman’ny olom-pirenena maro mikasika ny volam-bahoaka na koa hoe ny volan’ny mpiasa Malagasy akana ny karaman’ny mpanazatran’ny ekipam-pirenena malagasin’ny baolina kitra ankehitriny
Fanararaotana mamoafady mahazo ny ankizy Miha mahazo vahana eto Madagasikara
Nanaovana ady hevitra lehibe tetsy amin’ny Le pavé Antaninarenina omaly ny mikasika ny fanararaotana mamoafady mahazo ny ankizy. Raha tsiahivina tokoa mantsy dia mihamahazo vahana ity tranga mampalahelo ity eto amintsika
Tsy mifanaraka amin’ny soatoavina Notsipahan’ny depiote ny fandinihana ilay ITG
Notsipahan’ny «conférence des Présidents » teo anivon’ny Antenimierampirenena omaly 02 jona 2022 ny fampidirana anaty fandaharam-potoana ny tolo-dalàna mahakasika ny ITG (Interruption Thérapeutique de Grossesse)
Olona manjavona sy misy mibata Fampihorohoroana saim-bahoaka miharo bizina…
Mirarakompana ny resaka fanjavonana ankizy sy tanora vao erotrerony, izay misy manao fampilazana any anatin’ny tambazotran-tserasera. Herinandro teo izay no nisy ilay tranga iray niteraka resabe mikasika ilay
Fiatrehana ny hatsiaka Tena mila sokay ny vatana
Tafiditra tanteraka ao anatin’ny vanim-potoanan’ny ririnina isika izao. Ankoatra ny vitamina hahafahana mampitombo ny hery fiarovana ao anaty dia anisan’ny takian’ny vatana ihany koa ny sokay (calcium).
Lalatiana Rakotondrazafy Manamafy ny fifampitandrohana amin’ny TIM
Andro maromaro taorian’ny antsojay nanakana ny Antoko TIM tao Antsirabe ny sabotsy 28 mey lasa teo, dia nipoitra sy naneho hevitra momba iny ny Minisitry ny serasera sy ny kolontsaina Rtoa Lalatiana Rakotondrazafy.
Minisitry ny jono “Ho hazavaina amin’ny antsipiriany ny raharaha Faradofay”
Nanome toromarika ny amin’ny hahafahana manatsara hatrany ny fiainan’ny tantsaha rehetra manerana an’I Madagasikara ny filohan’ny repoblika, hoy ny minisitry ny jono sy ny toekarena manga,
Fakana an-keriny mirongatra Efa misy fiara sy olona araha-maso
Manoloana ny raharaha fakana an-keriny tovovavy nirongatra tato ho ato dia nanao fanambarana omaly ny teo anivon’ny polisim-pirenena fa misy ny fepetra maromaro ho raisain’izy ireo.
Karama 5 volana tsy voaloa Hitokona indray ny mpandanja fiara vaventy
Niverina nitokona indray ireo mpiasa eny amin’ny toerana fandanjana fiara no ny karamany tsy voaray. Vidin-katsembohany na karama efa 5 volana mantsy no voalaza fa tsy voaray. Hiakatra 72ora isan-kerinandro ny
Tezitra ny sendikan’ny mpiraki-draharaha “Tadiavin’ny mpitsara sasany atao mpiasa an-trano izahay”
Misy ny olana eo amin’ny mpitsara sy ny mpiraki-draharahan’ny fitsarana sy raha ny resaka nataon’ny filohan’ny sendikan’ireto farany omaly.
Pastera Heritiana “Mila mandray fepetra hentitra ny fanjakana…”
Maromaro ireo tovovavy very sy nanjavona tato ho ato teto an-drenivohitra. Saika manodidina ny 20 taona eo ho eo avokoa izy ireny,
Fanadiovan-drano mandehandeha Hanome rano fisotro madio olona miisa 13.000
Natolotry ny ambasadaoron’i Japon, Atoa Higuchi Yoshihiro, omaly ny rafitra fanadiovan-drano mandehandeha. Tonga nandray izany ny Ministry ny rano, ny fidiovana ary ny fanadiovana, Fidiniavo Ravokatra.
Manda Ravelojaona “Andraikitry ny antoko politika ny manabe ny olona”
Herintaona mialohan’ny fifidianana isika, hoy ny mpanao politika, Manda Ravelojaona. Isan’ny andraikitry ny antoko politika, hoy izy, ny manabe ny olona hoe andao hisoratra anarana ao anaty lisi-pifidianana.
Didim-poitra faobe tao ambohibao atsimo Notoloran’ny Filoha kilalao ireo ankizy
Zazalahy kely manodidina ny 200 isa no indray noforaina maimaim-poana ny faran’ny herinandro teo tao anatin’ny kaominina Ambohibao Atsimo, distrikan’i Manjakandriana.
Zaza Ramandimbiarison “Tsy vitan’ny lalàna fotsiny ny fitovian-jo”
Tsy vitan’ny lalàna fotsiny ny fampiharana ny fitovian-jo eo amin’ny lehilahy sy ny vehivavy na ny antsoina hoe “égalité des sexes”, hoy ny mpanao politika Zaza Ramandimbiarison.
Kaominina Talatamaty Nosantarina tamin’ny vavaka ny fankalazana ny 26 jona
Efa tafiditra tanteraka ao anatin’ny fankalazana ny fetim-pirenena 26 Jona ny kaominina Talatamaty, distrikan’Ambohidratrimo.
TENY GASY Madagasikara sy Tanibe-Britaina : efa hatramin’ny 1817
Ny fankalazana ny faha-fitopolo taona naha Mpanjaka britanika an’i Elisabeth II dia fanararaotra hampahafantarana ny fifaneraserana nisy teo amin’ny Malagasy (indrindra ny Merina,